Archive du 20180717
Riribe Tsy matahotra fifidianana fa …
Manoloana ny fifidianana izay tereren-ko masaka ataon’ny governemanta Ntsay Christian amin’izao dia manambara izahay, hoy i Riribe, filoha nasionalin’ny fikambanan’ny gadra politika eto Madagasikara sady filohan’ny Zatovo Toamasina fa tsy matahotra hiatrika fifidianana hampandany ny olona izay tohananay dia Atoa Marc Ravalomanana ary « 1er tour » dia vita.
Miverina amin’ny maha zatra
Tapitra iny ny baolina kitra eran-tany, Nisy ny mangidy dia tao koa ny mamy Ny resy tsy akoraina ny mpandresy tsy hobiana Afaka efa-taona indray mihaona am-pifaliana.
Fanamboaran-dalana Mazava izao hoe iza no tena mahavita azy !
« Amboarina ny lalana eto Madagasikara ». Io ilay teny filamatra sady fanamby nataon’i Marc Ravalomanana.
Tsy fananan’asa mianjady amin’ny tanora Ny traikefa no mbola tena lesoka
Misy ny asa eto amintsika, hoy ny “Management Ressources Humaines” (MRH) omaly fa anisan’ny vato misakana tsy hahafahan’ireo tanora misitraka izany ny tsy fananany traikefa.